विवाहपछि युवतीहरू किन मोटाउछन, कारण यस्तो छ ! — Himali Sanchar
विवाहपछि युवतीहरू किन मोटाउछन, कारण यस्तो छ !
काठमाडौं : युवतीहरू विवाहपछि मोटाउँछन। विवाहपछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तीब्र रुपमा बढ्ने गर्दछ। विवाहको ५ वर्षभित्र करीब ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ।
विवाहपछि शरीरमा हर्मोनल परिवर्तन हुने गर्छ। यसले गर्दा युवतीहरूको तौल बढ्न थाल्छ। विवाहअघि भन्दा पछि युवतीहरूको दैनिक समय तालिकाका व्यस्त हुन थाल्छ। जसका कारण उनीहरू पर्याप्त निदाउन पाउँदैनन्। यसले गर्दा पनि तौल बढ्न थाल्छ।
विवाहपछि शुरुका दिनमा युवतीहरू तनावमा हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा भोक बढाउने हर्मोनको लेभल बढ्ने गर्दछ जसले तौल बढाउँछ। मानिसहरू विवाह पहिले राम्रो देखिनका लागि आफ्नो डाइट र फिटनेसमा पूरा ध्यान दिने गर्दछन्।
विवाहपछि जीवनशैलीमा परिवर्तन हुने भएका कारण यस्ता कुराहरू छुट्ने गर्दछ जसले तौल बढ्छ। धेरैजसो मानिस २८–३० वर्षमा सेटल भएपछि मात्र विवाह गर्दछन्। जबकी अध्ययनका अनुसार ३० वर्षपछि हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजमको रेट कम हुन्छ जसका कारण तौल बढ्छ।